multi အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် hနှင့်wheel ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel
multi အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel
AOX-M စီးရီး ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် hနှင့်wheel ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (linear ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)such အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ကော်ပိုရိတ် လူမှုရေး တာဝန်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် သို့ ရှာအံ့သောငှါ အခွင့်အလမ်း ဘို့ တိုးတက်မှု, မျှဝေခြင်း နှင့် တိုးတက်ရေး နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ မိတ်ဖက် နှင့် cusသို့mers. တွင် ထို့အပြင်, အားလုံး ကျွန်တော်တို့၏ န်ဆောင်မှုများ များမှာ hနှင့်led ဖြတ်. cusသို့mer-centric စီမံခန့်ခွဲမှု, ပေးကမ်းခြင်း အဆိုပါ ကြီးမားသောest ဦးစားပေး သို့ cusသို့mer satဖြစ်faction ဘို့ AOX-M စီးရီး ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် hနှင့်wheel.
anti-တုန်ခါမှုအဆင့်: JB / T8219
အချိန်လဒ်: N / A
ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် torque sensing
အဆို့ရှင်ကို stem ကပြွီးအဘို့အ Bush
device ကို / tool ကို setting များအတွက် remote control
2. Precise အဆို့ရှင်အနေအထားတိုင်းတာခြင်း
AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံရိုးရာ potentiometer ဖျက်သိမ်းရေး, သံလိုက်သော induction အကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ်သုံးပြီး handwheel နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, တိုးတက်လာသောတည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အခါ actuator ပါဝါပြတ်တောက်ဘက်ထရီတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဆို့ရှင်အနေအထားရှိနိုင်ပါသည်မလိုအပ်ပါဘူး။
AOX-M စီးရီး 3. Valve mounting စံပေါင်းစုံ handwheel နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn
installation အနားကွပ်မာခ် ISO5210 သို့မဟုတ် DIN3210 စံနှင့်ညီသည်။ အဆို့ရှင်၏အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်ဖို့ output ကို drive ကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး။
နှစ်ချက်တံဆိပျကို 3A ï¼ PT3 / 4A တစ်PT1âတစ် PT1-1 / 2A optionalï¼
1. AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံ handwheel နှင့်အဆို့ရှင်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn စနစ်တကျ install နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီ။
6. AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံ handwheel နှင့်အဆို့ရှင်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
7. အဆိုပါအပူချိန်လျှပ်စစ် actuator ရဲ့အလုပ်လုပ်န့်အသတ်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
AOX တစ်ခုသာအစိုင်အခဲ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရေရှည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အမျှအချို့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာကိုကူညီခဲ့စနစ်များ, တည်စေပြီ။ CNC စက်စင်တာနှင့်အတူတစ်ဦးကတိစက်ပလက်ဖောင်းအဓိကတည်တတ်၏အဖြစ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံ handwheel နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn စိတ်ဝင်စားအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ customers.If ပို reailable ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မယ့်မှတ်တမ်းတင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတည်ထောင်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်, e-mail ဖြင့်ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ [email protected] ။
မေး: AOX-M စီးရီး၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်နည်းပေါင်းစုံ handwheel နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn?
တစ်ဦးက: အစိစစ်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ 1, ပစ်လွှတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမတိုင်မီ IQC (ဝင်လာသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး) ကအပေါငျးတို့သကုန်ကြမ်း။
2, IPQ (Input အားဖြစ်စဉ်ကိုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု) ကင်းလှည့်စစ်ဆေးရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးချင်းစီလင့်ခ်။
3, ပြီးနောက်လာမည့် proceess ထုပ်ပိုးသို့ထုပ်ပိုးမတိုင်မီ QC အပြည့်အဝစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကိုလက်စသတ်။
Q: သင့်ရဲ့ AOX-M စီးရီးအတွက်စိတ်ဝင်စားတာပါ အကယ်. ငါပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုငျသညျ့အခါပေါင်းစုံ handwheel နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn?
Q: သင့်ရဲ့ actuator များအတွက်အာမခံကာလလား
hot Tags:: multi အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်